I-Chrome: Ukuzonwabisa ngakumbi ngeeNjini zokuKhangela | Martech Zone
Inye kuphela into endisoloko ndiyithanda ukungcangcazela kuyo kukukhangela okungagqibekanga okanye uluhlu lweinjini- nokuba yiFirefox okanye safari. Ndikhangela eyam indawo rhoqo kangangokuba ndidla ngokongeza kuluhlu. Ukongeza, kuhlala kumnandi ukwenza izinto ezinje ngokwenza iBing yakho yokukhangela engapheliyo kwiChannel ukugcina izilo zisilwa (mna uyayithanda iBing!).
Ndide ndazakhela eyam Yongeza ifom yeNjini yokukhangela yeFirefox ukwenza izinto zibe lula. I-Chrome ayisiyonto ilula kangako, ayisebenzisi icandelo le-AddEngine elenziwa yiFirefox ngenxa yoko awunakukwazi ukwakha ikhonkco. Kananjalo, akukho ukwehla ekukhetheni i-injini yokukhangela.
Nangona kunjalo, kukho inqaku elinye elimnandi nge-omnibar… ungongeza igama eliphambili olikhethileyo ukongeza injini yokukhangela. Nantsi indlela yokongeza injini yokukhangela:
Nokuba ungaya kukhetho lwe-Chrome kwaye ucofe ulawule kwii-Injini zokuKhangela okanye ucofe ekunene kwi-Omnibar kwaye ukhethe ii-Injini zokuKhangela.
Yongeza igama lenjini yokukhangela okanye indawo ongathanda ukuyikhangela, igama eliphambili ukwahlula ngokulula, kunye ne-URL yokukhangela ene% s njengegama lokukhangela. Nanku umzekelo nge ChaCha:
Ngoku, ndinokuchwetheza ngokulula "ChaCha" kwaye umbuzo wam kwaye iChannel iya kuyifaka ngokuzenzekelayo i-URL kwaye iyithumele. Oku kulunge ngakumbi kunokubetha ukwehla kunye nokukhetha injini yokukhangela. Ndineenjini zam zoPhendlo ezinamagama aphambili… uGoogle, iBing, uYahoo, uChaCha, uBhlog… kwaye usebenzise nje i-omnibar ukufumana iziphumo ngokukhawuleza! Nje ukuba uqale uchwetheze, i-Chrome iyazigqiba kwaye ibonelele ngolwazi lokukhangela:
Unga nokuba hlaziya imeko yakho ye-Twitter usebenzisa i-omnibar okoko i-Twitter inendlela yokubuza yokwenza i-Tweet. Okanye ungongeza isinqumleli segama eliphambili ukukhangela i-twitter nge http://search.twitter.com/search?q=%s.
Ukwazisa: ChaCha ngumthengi wam. Bafumene iziphumo ezingakholelekiyo, nangona… ngakumbi xa ufuna into elula njengedilesi, inombolo yefowuni, umbuzo we-trivia, okanye nangcono… iziqhulo. Banamaphepha amangalisayo ngokubalaseleyo kubantu abadumileyo nakwizihloko, nabo.
tags: umkhangelichromeGoogle chrome
Firemail: Ukuthengisa nge-imeyile ngaphandle koMboneleli ngeNkonzo ye-imeyile